ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ပေးဖို့ စာပို့ရန် | Ko Rohingya
This entry was posted on March 24, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ, ဆောင်းပါး and tagged ချမ်းမြေ့. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အချိန်မလင့်မှီ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီး၍ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီးကို နိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်ပွားစေရန် တရားဝင် လှုံ့ဆော်သူနှစ်ဦး →